ရေနွေးငွေ့အပေါ်အခမဲ့ဂိမ်းရရှိရန်မည်သို့ - ရနှေးငှေ့ - 2019
အစပိုင်းမှာရေနွေးငွေ့၏ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သောကော်ပိုရေးရှင်း Valve ကနေမှသာအနည်းငယ်ရေနွေးငွေ့ဂိမ်းများ, ရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါဂိမ်းတတိယပါတီထံမှပေါ်ထွက်လာဖို့စတင်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကပေးဆောင်ခဲ့ရသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, အခြေအနေကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ ယနေ့မက်လုံးပေးလုံးဝအခမဲ့ဂိမ်းကိုပိုပြီးအရေအတွက်ကကစားနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့ကစားရန်တစ်ပြားမှဖြုန်းဖို့မလိုပါ။ မကြာခဏကဤဂိမ်း၏အရည်အသွေး paid version ကိုမှလမ်းမပေးပါဘူး။ အရသာတစ်ကိစ္စ, သင်တန်း, ပေမယ့်။ ချုံ့အတွက်အခမဲ့ဂိမ်းကစားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့အောက်ကဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။
အဆိုပါမက်လုံးပေးမည်သူမဆိုအခမဲ့ဂိမ်းနိုင် Play ။ ရိုးရှင်းစွာအဒီအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို client install လုပ်, ပြီးတော့သင့်လျော်သောဂိမ်းကိုရွေးပါ။ developer များဂိမ်းပြည်တွင်းအရာဝတ္ထုများ၏ရောင်းရငွေအပေါ်အချို့သောအခမဲ့လှည့်ခြင်းများဝင်ငွေ, ဒါသည်ဤဂိမ်း၏အရည်အသွေး paid မှယုတ်ညံ့သည်မဟုတ်။
သငျသညျရေနွေးငွေ့စတင်နှင့်သင့်အကောင့်အောက်မှာသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့သင်ကအခမဲ့ဂိမ်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, "အခမဲ့" ကိုရွေးချယ်ပါ, ထို filter ကိုအတွက်စတိုးဆိုင်နှင့်ရေနွေးငွေ့ဂိမ်းများကိုသွားပါ။
ဒီစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်အခမဲ့ဂိမ်းစာရင်းဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သောအားရွေးချယ်ပါကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါကကစားပွဲနှင့် installation ကိုဖွင့်ဖို့ခလုတ်တွေအကြောင်းအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူစာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဂိမ်း၏ဖော်ပြချက်ဖတ်ပါ, သင်ပိုမိုဂိမ်းနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရချင်တယ်ဆိုရင် screenshots များနှင့် trailers ကြည့်ပါ။ ကစားသမားများနှင့်အဓိကဂိမ်းမြေားကိုနှစ်ဦးစလုံး, ဂိမ်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များပြုစုသူနှင့်ထုတ်ဝေသူနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များ: ဒီစာမျက်နှာကိုလည်းဂိမ်း၏ပစ္စုပ္ပန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်မည်ကိုသေချာစေရန်စနစ်လိုအပ်ချက်များကိုစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ။
အဲဒီနောက် installation ကိုစတင်ရန် "Play ကို" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသင် hard drive ကိုမှဂိမ်းကြာသောအရပ်, အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ကစားပွဲကို install လုပ်ဖို့ဖိုလ်ဒါကိုရွေးပါနဲ့ desktop ပေါ်မှာဖို့နဲ့ "Start ကို" မီနူးထဲမှာ shortcuts တွေကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အဲဒါကိုသင့်ရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်အတူဂိမ်း load လုပ်ဖို့ကြာအနီးစပ်ဆုံးအချိန်ကိုပြသပါလိမ့်မည်။
installation ကို Continue ။ ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲစတင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒေါင်းလုဒ်မြန်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များသည် disc ကိုပေါ်, download ပြုလုပ်ကျန်ရှိသောအချိန်ဂိမ်း၏အသံဖမ်းမြန်နှုန်းပြသပါလိမ့်မည်။ သင်ကသင့်လျော်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ခုန်ခဏရပ်ပေးနိုင်သည်။ သငျသညျအခြို့သောအခြား application များအတွက်အကောင်းတစ်ဦးကိုအင်တာနက်မြန်နှုန်းလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီကအင်တာနက်လိုင်းကိုဖွင့်လွှတ်ပေးခြင်း။ ဒေါင်းလုပ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြန်လည်နိုင်ပါသည်။
ဂိမ်းကို install ပြီးတာနဲ့သူကဖြန့်ချိဖို့ "Play" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အလားတူပင်အခြားအခမဲ့ဂိမ်းထားကြ၏။ ဒါ့အပြင်အခါအားလျော်စွာသင်တစ်ဦးအချို့သောကာလများအတွက်ပေးဆောင်ဂိမ်းတွေနဲ့အခမဲ့ဆော့ကစားနိုင်သည့်ကာလအတွင်းရှယ်ယာကျင်းပခဲ့တယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များထွက်သည် Watch အဓိကရေနွေးငွေ့စတိုးဆိုင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဲဒီမှာပင် Duty ၏အရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ် type ကိုခေါ်ရန်သို့မဟုတ် Assasins Creed မကြာခဏရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ယခုအချိန်တွင်လက်လွတ်မ - အခါအားလျော်စွာဒီစာမျက်နှာစစ်ဆေးပါ။ ထိုကဲ့သို့သောရှယ်ယာစဉ်အတွင်းထိုအဂိမ်းများကိုကြီးမားတဲ့လျှော့စျေးနဲ့ရောင်းနေကြတယ် - အကြောင်းကို 50-75% ။ အခမဲ့ကာလအတွင်းသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သင်သည်သင်၏ hard drive ပေါ်တွင်အခန်းတစ်ခန်းအောင်ဂိမ်းဖယ်ရှားပစ်ရန်အဘယ်သူမျှမပြဿနာများရှိသည်လိမ့်မယ်။
အခုဆိုရင်သင်ရေနွေးငွေ့အပေါ်အခမဲ့ဂိမ်းရနိုင်ပုံကိုငါသိ၏။ အဆိုပါမက်လုံးပေးသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံဖြုန်းမဟုတ်နေစဉ်, ထိုအရပ်၌များစွာသောအခမဲ့ multiplayer ဂိမ်းတွေဟာဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။